Soo dejisan Adobe Flash Player 23.0.0.185... – Vessoft
Soo dejisan Adobe Flash Player
Adobe Flash Player – plugin ah lagama maarmaan u ah shaqada saxda ah ee multimedia oo ka kooban is-dhexgal ah daalacashada ugu. Software waxay bixisaa macaamiloon sare ah content video oo u saamaxaaya in ay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan ee internetka ama codsiyada furmo browser. Software ka kooban yahay dardargelinta ka dhisay-in hardware ee naqshadeynta 2D iyo 3D. Software waxaa si balaadhan looga isticmaalaa ka mid ah samaynta iyo u saamaxaaya in ay codsan qalab kala duwan si loo ogaado xuduudaha ka font ama kala duwanaansho dhowr ah oo kasoogaray qoraalka. Sidoo kale software waxaa warbixin joogta ah loo maqli karo wax ku ool ah oo ka kooban warbaahinta iyo ka hortagtaa ifbaxay ah si ay u qabtaan falalka kala duwan ee nidaamka.
Loo maqli saxda ah ee ka kooban warbaahinta
Inaan u ciyaaro kulan, animation iyo advertising
Xawaaraha Hardware ee naqshadeynta 2D iyo 3D
Adobe Flash Player Software la xiriira: